नेप्सले आफ्नो काम चाहीं नगर्ने अनि दोषजति ब्रोकरलाई दिन पाईन्छ ? भरत रानाभाट
बिजखबर संवाददाता २०७७ असार २४ (July 8, 2020) मा प्रकाशित
लकडाउनका कारण ३ महिनाभन्दा बढी बन्द रहेको नेपालको पूँजी बजार गत हप्तादेखि संचालनमा आएको छ । लगानीकर्ताले बजार सुधारका लागि थुप्रै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग राखेपनि नियामकले एक डिम्याट खाता एक ब्रोकर, प्जेलमा राखिएको सेयर बिक्री गर्न नपाउनेजस्ता अब्यवहारिक निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ भने नेप्सले संचालनमा ल्याएको अनलाईन प्रणालीले पनि सहज रुपमा काम गरेको छैन । नेपालको पूँजी बजारमा रहेका समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष भरत रानाभाटसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार ः
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘एक ब्रोकर एक डिम्याट’ खाता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसो गर्नु उचित हो ?
एउटा डिम्याट खाताले मल्टिपल ब्रोकरबाट कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर यहाँ केही समस्या देखियो । डिम्याट खातामा भएको सेयर ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस)मा रियल टाईममा ट्रान्सफर गर्न समस्या आयो । जसले गर्दा मल्टिपल ब्रोकरबाट कारोबार गर्न रोक लगाइयो । नियामकले यो भर्खरै लागू गरेका कारण कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा नियामक र ब्रोकर दुवैले गृहकार्य गरिरहेका छन् । यसलाई सहज बनाईनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा जतिवटा वाणिज्य बैंक छन् ती सबैमा बैंक खाता खोल्न पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा किन दुईवटा मात्र डिम्याट खाता ? जति पनि डिम्याट खाता खोल्न पाउनुपर्छ । अर्को एउटा डिक्याट खाताबाट अर्को डिम्याट खातामा सेयर ट्रान्सफरलाई रियलटाईम बनाईनुपर्छ । यसलाई चाँडोभन्दा चासो निकास दिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई एउटा ब्रोकरबाट मात्र कारोबार गर भनेर ‘फोर्सफुल्ली’ नियम लाद्न पाईदैंन ।
तीन महिना सेयर बजार बन्द हुँदा प्रणालीगत सुधार हुन्छ भन्ने धेरैको आशा थियो । तर एक ब्रोकर एक डिम्याट खाता, प्लेजमा भएको सेयर बिक्री गर्न नपाईने जस्ता व्यवस्थाले झन् समस्या आयो भनिरहेका छन् । यसलाई कसरी मुल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
योबीचमा कुनै पनि काम नभएको भन्ने होइन । लामो समयदेखि विवादमा रहेको ५ प्रतिशतको पूँजीगत लाभकरलाई टुङ्गोमा पुर्याइएको छ । यसले बजारलाई दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यो समयमा सबै लगानीकर्ताले तथा ब्रोकरले माग गरेको बैंक र डिम्याट इन्ट्रिग्रेशन थियो । डिम्याट इन्ट्रिग्रेशनमा एक डिम्याट खाता एक ब्रोकरले केही समस्या देखिएको छ । यस्तै आईपीएस कनेक्टमार्फत भुक्तानी गर्ने सिमालाई पनि खुला गरिएको छ । लकडाउनको समयमा केही सामान्य कामहरु भए तर बजारले आशा गरे अनुरुपको काम भने हुन सकेन । लकडाउनको समयमा नियामक तथा नीति निर्माताले जुन काम गरे यहिँ गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने नेपाली पूँजी बजारमा चाडै नै धेरै सुधार आउने छ ।
ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस)मा बैंक इन्ट्रिग्रेशनको काम ब्रोकरहरुको हो तर ब्रोकरहरुले उक्त काम नगर्दा समस्या आयो भनेर नेप्सेले आरोप लगाईरहेको छ । वास्तविकता के हो ?
नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले अनलाईन प्रणाली ल्याउँदै गर्दा हामीहरुले यस विषयमा स्पष्ट पार्न माग गरेका थियौं । अनलाईन लाईभमा जाँदासम्म ब्रोकरलाई सबै प्लेटफर्म नेप्सेले नै बनाएर दियो र त्यहिं अनुरुप काम गर्दै आएका थियौं । जब समस्या आउन थाल्यो त्यसपछि मात्रै नेप्सेले टीएमएसको काम ब्रोकरको हो भन्न थालियो । अहिलेको टीएमएसमा धेरै समस्या छन् । यदि टीएमएस ब्रोकरको हो भने हामीले नेप्सेले ल्याएकै टीएमएस चलाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न किन गर्यौं ? नेप्से आफैंले टीएमएस दिएपछि बजारमा समस्या नआउने बनाईदिनुपर्यो । यदि नेप्सेले त्यसो नगर्ने हो भने टीएमएस ब्रोकरलाई बनाउन दिएर सोर्सकोड प्रदान गर्नुपर्छ । ब्रोकरलाई छुट्टै टीएमएस ल्याउन खुला गरिदिनुपर्छ । नेप्से आफैले टीएमएस चलाउने, ब्रोकरलाई कुनै पनि एक्सेस नदिने अनि ब्रोकरले काम गरेर भनेर दोष दिएर नेप्से पन्छिन मिल्दैन ।
‘अनलाईन लाईभमा जाँदासम्म ब्रोकरलाई सबै प्लेटफर्म नेप्सेले नै बनाएर दियो र त्यहिं अनुरुप काम गर्दै आएका थियौं । जब समस्या आउन थाल्यो त्यसपछि मात्रै नेप्सेले टीएमएसको काम ब्रोकरको हो भन्न थालियो । अहिलेको टीएमएसमा धेरै समस्या छन् ।’
नेप्सेको टीएमएसमा ब्रोकरले अपडेट गराउन, आफ्नो तरिकाले नयाँ मोडलहरु थप गर्नेलगायतका कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन । अहिले क्लियरिङ बैंक छनौट गरेको पनि नेप्सेले । आजका दिनमा चार वटा क्लियरिङ बैंक छन् भने एसीएचसिएल ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि नेप्से, टीएमएस पनि नेप्सेकै अनि ब्रोकरले गरेनन् भनेर पन्छिन मिल्छ ? यदि हामीलाई सोर्स कोड सहितको टीएमएस दिएको खण्डमा काम भएन भने आरोप लगाउन पाइयो । ब्रोकरलाई नयाँ टीएमएस ल्याउन दिएर समस्या आएमा पनि दोष लगाउन पाइयो तर ब्रोकरलाई एपीआई नै नदिने अनि समस्या आउँदा ब्रोकरलाई ओराप लगाएर नेप्से पन्छिन पाउँदैन ।
नेपालमा ब्रोकरले नेप्सेकै टीएमएसमा काम गर्दै आएका छन् । अन्य मुलुकका ब्रोकरले नै टीएमएस बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याईरहेका छन् । के नेपालका ब्रोकरहरु सक्षम नभएर नेप्सेकै टीएमएसमा भर पर्नु परेको हो ?
हामी टीएमएस बनाउन सक्षम छौं । तर अहिले हाम्रो बाध्यता छ । नेप्सेले अनलाईन लाईभमा जानुभन्दा २/३ महिना अघि मात्र हामीलाई डाटा सेन्टर बनाउनुपर्छ भनेर भन्यो ब्रोकरले सोही अनुरुप छुट्टै राखे । त्यसबेलासम्म टीएमएसको विषय नै उठान भएन । जब अनलाईन कारोबार सुरु भएर समस्या आयो त्यसपछि मात्र नेप्सले टीएमएसको काम ब्रोकरले गर्नुपर्छ भनेर हामीप्रति पन्छाउन खोज्दैछ । आजको दिनसम्म टीएमएस नेप्सेकै हो । अहिले पनि ब्रोकरले नेप्सेलाई कि बजारले खोजेजस्तो टीएमएस दिनुस हैन भने हामी आफै बनाउछु भन्दै आएका छौं । जबसम्म नेप्सेले ब्रोकरलाई एपीआई दिँदैन तबसम्म हामीले टीएमएस बनाउन सक्दैनौं । नेप्से आफैले ल्याएको टीएमएसले काम नगर्ने त्यसको दोष चाहिँ ब्रोकरलाई लगाउन खोजियो । नेप्सेले जुन काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो नगर्ने, दिनुपर्ने सेवा नदिने अनि काम गरेर भनेर ब्रोकर र लगानीकर्तालाई दोष लगाउन पाईन्छ ? अहिलेको सिस्टमको सम्पूर्ण भागिदार नेप्से हुनुपर्छ ।
ब्रोकरलाई नेप्सेले एपीआई नदिनुका कारण चाहिँ के हो ?
सुरुमा नेप्सेले आईटी पोलिसी बनेको छैन त्यसकारण दिन मिल्दैन भन्यो । उक्त नीति बनाउनै नेप्सेले लामो समय लगायो । अहिले उक्त नीतिलाई नेप्सेको बोर्डले स्वीकृत गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ । बोर्डबाट स्वीकृत भएर आएपछि एपीआई पाउन सकिन्छ । तर हामीले नीति नआएपनि एउटा गाईडलाईन बनाएर ब्रोकरलाई एपीआई दिएर टीएमएस बनाउन दिन माग गर्दै आएका छौं । यदि नेप्सेले ब्रोकरलाई टीएमएस बनाउन दिएमा अहिलेको समस्या सबै समाधान हुनेछ ।
यदि नेप्सेले एपीआई दिएको खण्डमा कति समयभित्र ब्रोकर आफैले टीएमएस बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् ?
नयाँ टीएमएस बनाउन स्वदेशी र विदेशी गरी ४/५ वटा कम्पनीहरुसँग छलफल भैरहेको छ । उनीहरुको भनाईअनुसार कम्तीमा पनि ५/६ महिना लाग्नेछ । टीएमएसलाई नेपालको नीति नियम अनुसार निर्माण गर्नुपर्छ । नेप्सेले टीएमएस ल्याएको पनि डेढ बर्ष भैसक्यो अझै पनि काम गर्न सकेको छैन ।
अहिले लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कमिशन उच्च भयो भनेर विरोध गर्दै आएका छन् भने धितोपत्र बोर्डले पनि यस विषयमा अध्ययन गर्न नयाँ कमिटि गठन गरेको छ । के नेपालमा ब्रोकर कमिशन उच्च नै हो ?
नेपालमा ब्रोकरले सेयरको खरिदबिक्री र डिम्याटको काम मात्र गर्दै आएका छन् । हामीले धितोपत्र बोर्डलाई पनि अबका दिनमा कमिशनको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेका छौं । के नेपालमा ब्रोकर कमिशन वास्तवमै महङ्गो हो त ? यस विषयमा अन्य मुलुकमा के प्राक्टिस छन् नेपालमा के छन् सबै विषयमा अध्ययन हुनु जरुरी छ । यदि महङ्गो नै रैछ भने पनि कुन कुरामा पनि कति महङ्गो छ सोही अनुरुप समाधान गरिनुपर्छ । तर हचुवाको भरमा महङ्गो भयो भनेर भन्नु उचित होइन । यस विषयमा अध्ययन गर्न धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर, लगानीकर्ता लगायत सेयर बजारसँग जोजो सम्बन्धित छन् उनीहरु सम्मिलित कमिटि गर्न माग गरेका छौं । अर्को कुरा ब्रोकरले हरेक बर्ष आफ्नो वित्तीय विवरण बोर्डमा पठाउँदै आएका छन् । सोही रिपोर्टका आधारमा पनि महङ्गो छ वा छैन छुट्याउन सकिन्छ । यस विषयमा नियामक निकायले सार्वजनिक रुपमै भनिदिनुपर्छ । तसर्थ हचुवाको भरमा घटाउने वा बढाउने भन्दा पनि सबै सरोकारवाला सम्मिलित कमिटि बनाएर विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।
‘के नेपालमा ब्रोकर कमिशन वास्तवमै महङ्गो हो त ? यस विषयमा अन्य मुलुकमा के प्राक्टिस छन् नेपालमा के छन् सबै विषयमा अध्ययन हुनु जरुरी छ । यदि महङ्गो नै रैछ भने पनि कुन कुरामा पनि कति महङ्गो छ सोही अनुरुप समाधान गरिनुपर्छ । तर हचुवाको भरमा महङ्गो भयो भनेर भन्नु उचित होइन ।’
नेपालमा भर्खरै लगानीकर्ताले ब्रोकरको खातामा २५ प्रतिशत रकम एड्भान्स राखेर काम गर्न थालेका छन् । भोलिका दिनमा शतप्रतिशत एड्भान्स हुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई ब्याज दिनुपर्छ भनेर ब्रोकरले नै आवाज उठाएका छन् । लगानीकर्ताको माग ब्रोकरले नै उठाउँदै आएका छन् ।
अहिले ब्रोकरहरुले सेयर खरिदबिक्रीको सेटलमेन्ट गर्न सकेनन्, सेयर बिक्री गर्नेले समयमै पैसा पाएनन् भन्ने गुनासोहरु पनि आईरहेको छ । किन यस्तो भैरहेको छ ?
ब्रोकरले सेयर किन्नेसँग चाहिं समयमै पैसा उठाउन सकेका छ्रैनन् तर बिक्री गर्नेलाई समयमै भुक्तानी गर्दै आएको छ । बैंकले ब्रोकरले कर्जा लिएरै भएपनि सेयर बिक्री गर्नेलाई भुक्तानी गर्दै आएका छन् । लकडाउन कारणले सामान्य अवस्थाभन्दा केही फरक अवस्था आएको छ । अहिले ब्रोकरको २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने ८० प्रतिशत रकम उठाउनुपर्ने छ । गतहप्तादेखि बजार खुलेको छ । यो हप्तासम्ममा यी सबै समस्या समाधान हुनेछ ।
नेपालको सेयर बजारमा इन्साईडर ट्रेडिङको विषय पनि उठान भैरहन्छ । ब्रोकरहरु नै इन्साईडर टे«डिङमा संलग्न छन् भन्ने ओरोपपनि लाग्दै आएको छ । नेपालको इन्साइडर ट्रेडिङ र ब्रोकरप्रति लाग्दै आएको ओरोपको वास्तविकता के हो ?
कुनै पनि कम्पनीको पहिलो सूचना निर्णय गर्ने उक्त कम्पनीको सञ्चालकहरुलाई थाहा हुन्छ । अथवा उक्त कम्पनीको उच्च तहका व्यवस्थापनलाई थाहा हुन्छ । कम्पनीबाट निर्णय भएपछि नेप्सेलाई जानकारी गराईन्छ । नेप्सेको वेवसाईटमा राखेपछि मात्र ब्रोकर र सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई थाहा हुन्छ । तर सेयर खरिदबिक्री हुँदा ब्रोकरमार्फत नै गर्ने हो । यस्तो अवस्थामा जुन ब्रोकरमार्फत सेयर खरिदबिक्री बढी हुन्छ उसैमाथि दोष थुपार्ने गरिँदै आएको छ । पहिलो कुरा ब्रोकरले आफ्नो नामबाट आफ्नै कम्पनीमार्फत सेयर खरिदबिक्री गर्ननै पाउँदैन । दोस्रो कुरा कुनै पनि कम्पनीको सूचना सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकले पहिला थाहा पाउँछन् भने अन्तिममा मात्र ब्रोकरकहाँ आईपुग्ने हो । तेस्रो त्यहिं इन्साईडर ट्रेडिङ हुन्छ भनेर नै ब्रोकरलाई नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनीको सञ्चालक बस्न रोक लगाईएको छ । यस्तो अवस्थामा ब्रोकरले इन्साईडर ट्रेडिङ गर्न सक्छ ? यो त आरोप मात्रै हैन र ।
ब्रोकरले मार्जिन लेण्डिङ गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पनि पायो तर कारोबार हुन सकिरहेको छैन । कहाँ रोकियो ?
जुन् बेला ब्रोकरलाई राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स दियो त्यतिबेला ब्रोकर मार्जिन लेण्डिङ सम्बन्धी निर्देशिकामै ५० प्रतिशतको सिमा राखियो भने बैंकहरुले पनि त्यति नै प्रदान गर्दै आएका थिए । पछि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेर बैंकहरुले प्रदान गर्ने मार्जिन लेण्डिङको सीमा बढाएर ६५ प्रतिशत बनाईयो, ब्रोकरको ५० मै अड्कियो । बैंकमा ६५ प्रतिशत पाईरहेको छ भने ब्रोकर कहाँ ५० लिन किन जाने ? ब्रोकरबाट मार्जिन कर्जा लिँदा लगानीकर्ताले उक्त कर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम एउटा कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर बैंकबाट लिएको सबै मार्जिन कर्जा एउटै कम्पनीमा लगानी गर्न पनि पाउँछ ।
यसैगरी ब्याजदरमा पनि समस्या छ । अहिले ब्रोकरले पनि बैंकबाटै कर्जा ल्याएर मार्जिन लेण्डिङ गर्ने हो त्यसो हुँदा बैंककोभन्दा केही ब्याज महङ्गो पर्न जान्छ । ब्याज महङ्गो परेपछि लगानीकर्ताहरु ग्राहककहाँ किन आउने ? यसको लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले पनि राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेश गरेको छ । आशा छ अब आउने मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्ने छ ।
सेबोन समक्ष लगानीकर्ता संघसंस्थाका नेताको आत्मसम्पर्ण, अब सेयर बजार बन्द र अन्दोलन नगर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर
मार्जिन लेण्डिङले पनि नधानेपछि दिनभर उचालिएको नेप्से अन्तमा पोखियो, कारोबार रकम अर्ब माथी
पहाडको स्वरुप दिँदै ओरालो लाग्यो नेप्से, कारोबार रकमले छाड्दै साथ
आन्दोलनरत सेयर लगाीकर्तालाई ब्रोकरले छाडे साथ, सेयर कारोबार गर्ने निर्णय
सेयर लगानीकर्ताको ‘केवाईसी’मा धितोपत्र बोर्डको कडाई, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था